ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် လေဆေးသောက်ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ . . – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်က ဆေးမြီးတိုတွေ၊ အထူးသဖြင့် လေဆေးသောက်ရင် မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ လေမပါဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီလို လေဆေးသောက်တာကြောင့် ကလေးမှာ တခြားထိခိုက်မှုကော ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား ဆရာ။
A. ဆေးတွေသောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို သေချာပြောပြလိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သောက်လိုက်တဲ့ဆေးတွေက ကလေးဆီကို အကုန်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီလို ရောက်သွားတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သောက်မယ့်ဆေးက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လည်း တကယ့်ကို သောက်သင့်တယ်၊ ကလေးအတွက်လည်း အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာ သေချာတဲ့ ဆေးမျိုးကို ရွေးချယ်ပြီးမှ ဘယ်လောက်ပမာဏ သောက်ရမှာလဲဆိုတာ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေက ဆေးတစ်မျိုးတိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် ပထမဆုံးသုံးလက အရမ်းအရေးကြီးတာ။ ဒီကလေးလေး ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ စတင်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သောက်လိုက်တဲ့ဆေးက မှားသွားရင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းတာ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆေးတွေကျတော့ ကလေးမှာ အသားဝါတာ၊ ကျောက်ကပ်ထိတာ၊ ထွက်လာတဲ့သွားတွေမှာ အရောင်တွေပါလာတာ စသဖြင့် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တကယ်ကို သုတေသနတွေ လုပ်ထားပြီး ဒီဆေးတစ်မျိုးက မသောက်သင့်ဘူး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရင် ရှောင်ရပါမယ်။ ဒီဆေးကတော့ အန္တရာယ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာ သေချာတဲ့ဆေးကိုမှ တိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေကျရင် ဒီဆေးထဲမှာ ဘာတွေပါမှန်းလည်း မသိဘူး၊ ဒီဆေးက အန္တရာယ်ရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာလည်း သေချာမသိဘူးဆိုတဲ့ ဆေးမျိုးဆိုရင်တော့ ဆရာတို့က တိုက်လေ့မရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆေးသောက်လို့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူးလေ။ ပြောရရင် ဒီဆေးတစ်မျိုးက သောက်လိုက်ရင် မိခင်မှာ ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးရှိမယ်၊ ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိမယ်ဆိုတာ ချိန်ဆပြီး အကျိုးရှိတဲ့ ဆေးကိုသာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို တိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်ထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်ဆင့်ကမ်းပြီး တိုက်နေတဲ့ ဆေးတွေရှိတယ်။ အဲဒီဆေးကို လေနိုင်ဆေးလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီဆေးသောက်ရင် ကလေးမှာ လေမပါဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိတယ်၊ အဲဒီလေနိုင်ဆေးက ဘာတွေနဲ့ ဖော်စပ်ထားတာလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ သုတေသန လုပ်ထားတာလဲ၊ ဒီဆေးတွေသောက်လိုက်ရင် ဘာတွေအကျိုးရှိပြီး ကလေးကို ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ သေချာမသိဘူး။ အဲဒီလိုမသိတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သောက်ပါလို့ သွားပြောဖို့ဆိုတာ တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကလေးမှာလေပါတယ်၊ လေမပါဘူးဆိုတာ မွေးကတည်းက ပါလာတာမရှိပါဘူး။ ကလေးကမွေးလာတာ ဒီအတိုင်းပဲ၊ ကလေးက နို့ကိုစို့တဲ့အခါ လေတွေပါလာတာ၊ လေတွေစို့မိလို့ နို့တိုက်ပြီးတိုင်း ကလေးကို လေထုတ်ပေးရတာပါ။ ဒီဆေးကို တိုက်ထားလိုက်ရင် ကလေးကလေမပါဘူးဆိုတာ တကယ့်ကို သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် တော်တော်သံသယဖြစ်စရာပါပဲ။ လေဆိုတာ နဂိုကတည်းက ပါလာတာမှမဟုတ်ဘဲ။ ကလေးဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တဲ့အခါ ကလေးဆေးရုံတွေမှာ အဲဒီလိုဆေးတွေ သောက်ထားတဲ့ မိခင်ကမွေးတဲ့ ကလေးတွေက ပိုပြီးအသားဝါတတ်တယ်လို့ သိထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ဒီဆေးကို ဘယ်လောက်သောက်လို့ ဘယ်နှယောက်ဝါသွားတယ်ဆိုတဲ့ တိတိကျကျ သုတေသနမရှိသေးပါဘူး။ ဒီတော့ ဒါသောက်လိုက်ရင် ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သေချာမသိပါဘူး။ အဲဒီလိုမသေချာတဲ့ ဆေးမျိုးကို ဆရာတို့က ပေးလေ့မရှိပါဘူး။ ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် လေနိုင်ဆေးတင်မကပါဘူး၊ ဘယ်ဆေးမဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်မပါရင် မသောက်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့ ဆေးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီးသောက်တာ အရမ်းအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
Related Items:Featured, medical knowledge, Pregnancy